सिभिल अस्पतालका डाक्टर बस्ने घर बाहिर उनीहरुलाई हटाउन माग गर्नेको भिड – Satya Samachar
पाेखरामा ४० वर्षे हाेटल साउनीसंग ग्राहककाे पिरती बसेपछि, हेर्नुस् यस्ताे भयाे।
यसरी मा’रि’एको रहेछ दुई प्रहरीलाई ! पक्राउ परेकाले दिए यस्तो वयान
एक मिनेटको फरकमा सुमिताले जन्माइन तीन छोरा
सु,र्खेतबाट दै,लेख जादै गरेकोे बस ब्रे,क फेल भै दु,र्घ,टना
बाटोमै अस्ताए सुबिन : परिबारमा चल्यो आशुको भेल
हात्तीछाप चप्पल पड्काउदै शहर छिरेका सुकुम्बासी विष्णु पौडेलले कसरी ठडाए भैंसेपाटीमा करोडौंको यो बंगला
जति सुकै बिजिभए पनी केबल २ मिनेट समय दिएर एक पटक अवस्य पढ्नुहोला !
प्रधानमन्त्रीले गत सालको चैतदेखिको लिएका छैनन् पारिश्रमिक
त,स्करले नि,र्मम ह,त्या गरेका अर्का प्र,हरी को सब भेटियो
दशैँको मुखमा २२ बर्षिय सुबिन लम्सालको सडक दुर्घटनामा मृत्यु
मुख्य पृष्ठ /समाचार/सिभिल अस्पतालका डाक्टर बस्ने घर बाहिर उनीहरुलाई हटाउन माग गर्नेको भिड
सिभिल अस्पतालका डाक्टर बस्ने घर बाहिर उनीहरुलाई हटाउन माग गर्नेको भिड
काठमाडौ । केही घटनाले हामी मानवलाई आफ्नै कार्यले आफैलाई नराम्ररी गिज्याएको हुन्छ । यो फोटो राजधानी काठमाडौको बानेश्वर स्थित सिभिल अस्पतालमा काम गर्ने डाक्टर आइसोलेसन बस्ने घर बाहिरको हो । जम्मा भएको भिड उनीहरुलाइ त्यहाँबाट निकाल्नुपर्छ भन्ने जत्थाहरुको हो। यी मानिसहरु भोलि बिरामी भए वा संक्रमित भएमा कहाँ जान्छन् कुन्नि। यस्ता मानिसको भेषमा रहेका पशुहरुलाई के भन्नु । यो तस्विरले सबैलाई सोच्न बाध्य बनाएको छ ।
राजधानीमा त यस्तो छ भने दुर्गम बस्तिमा के होला ? उनीहरु संक्रमित भएपछि उनीहरुको नारी छाम्ने, सास फेर्न गाह्रो भएका बेला मुखमा स्वास दिने कार्यमा समेत डाक्टर पछि परेका छैनन् । तर टोलको सयौँ मिटर पर बसेका मानिसलाई आफ्नो चिन्ता भयो । विश्व स्वास्थ्य संगठनले र नेपालकै स्वास्थ्य संस्थाका सन्देश मोबाईदेखि विभिन्न सञ्चार माध्यममा प्रशारण प्रकाशन भइरहेका छन् । केही फिट दुरी कायम गर्दा संक्रमितबाट भाइरस सर्दैन भनेर विश्वभरी भनिएको छ । उनीहरुले यो कुरा थाहा नपाएकापनि हैनन् । तर मानवताभित्रको पशुत्व प्रर्दशन गरेका मात्र हुन् ।
यहाँ सिभिल अस्पतालमा काम गर्ने स्वास्थ्यकर्मीलाई टोलबासीले होस्टेल नै छिर्न नदिएपछि तनाव सिर्जना भएको छ । कोरोना संक्रमणको संकटको बेला यसरी अहोरात्र सेवामा खटने स्वास्थ्यकर्मीप्रतिको यस्तो व्यवहार उचित कदापी हैन । नेपाल होस्टल एशोसिएसन ललितपुरकी निवर्तमान अध्यक्ष सुनिता बाटाजुले यो विषय निकै गम्भीर भएको बताउँदै यसमा सबै पक्षले सतर्कता अपनाउनुपर्नेमा कुनै विकल्प नरहेको बताईन् । बाटाजुले भनिन्, सुरक्षा सतर्कताका मापदण्डमा कुनै सम्झौता नगरेर समस्या समाधानको बाटो रोज्न सकिन्छ ।
हामी सेवा दिन तयार छौ । दिइरहेका छौ । हामी त्यही घरभित्र हुनेलाई चिन्ता छैन । तर टोलवासीलाई चिन्ता भएको छ । यो विश्वका लागि लाजमर्दो तस्विर हो । यो सोचलाई तपाई के भन्नुहुन्छ । समाचार लिंक राखेर आफ्नो विचारसहित सामाजिक सञ्जालमा सेयर गर्नुहोला । समाज सुधार जरुरी छ । यो तपाई हामीले नै गर्ने हो ।
लकडाउनमा श्रीमती माइतीमै फसिन्, यता श्रीमानले प्रेमिकासँग बिहे गरे
शान्ता चौधरी आईसीयुमा
नेपाली लाई लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी जान प्रति,बन्ध गर्ने भारतलाई दार्चुलाका सीडीओको जवाफ : नेपालको भुमिमा प्रतिब,न्ध गर्ने हक भारतलाइ छैन
आज मंगलबारको राशिफल वि.सं.२०७७ साल जेठ १३ गते । मंगलबार । ईश्वी सन् २०२० मे २६ तारिख
9 hours अघि
13 hours अघि